Qalabka khadka tooska ah si sawir cad looga dhigo sawir | Wararka Gadget
Paco L Gutierrez | | Sawir
Tifaftirka sawirku waa shay ay gaari karto qofkasta oo haysta taleefanka gacanta ama kombiyuutarka tanina waxay na siineysaa fursado badan oo kala duwan marka aan la shaqeyneyno sawir. Beddelka asalka iyo caddaanka ayaa ah tan ugu badan ee la codsado dadka, laakiin qof kastaa garan maayo hubaal shaandhada ama dalabka loo adeegsanayo in lagu gaadho natiijadan. Sooyaal cadaan ah ayaa sawirro siiya muuqaal iswaafaqsan oo ka madax banaan carqaladeynta.
Tan waxaa sii dheer, sababaha mid ka mid ah ayaa laga yaabaa inay tahay inaan dooneyno inaan si fiican u adeegsanno sawir qaadista inaad ugu isticmaasho dukumiinti rasmi ah, sida DNI ama liisanka darawalnimada. Sidoo kale waa wax aad caadi u ah in loo isticmaalo aaladda noocan ah sawirrada muuqaalka leh ama avatarka. Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa xulashooyinka ugufiican si aan ugu badalno asalka sawiradeena midab cad talaabooyinka fudud.
1 Qalabka internetka si loo dhigo asalka cad
1.1 Ka saar BG
1.2 Ka saarida AI
2 Codsiyada si loogu dhejiyo asalka cad mobilka
2.3 Tifatiraha Madadaalada Eraser Madadaalada
Qalabka internetka si loo dhigo asalka cad
Ka saar BG
Codsi websaydh aad u tiro badan oo na siiya tifaftire awood u leh inuu aqoonsado dadka iyo walxaha ama xayawaanka labadaba. Waxay gabi ahaanba ka saari doontaa asalka sawirka dhowr ilbiriqsi gudahood. Codsigan websaydhku waa mid fudud oo loo isticmaali karo sida gelitaanka degelkiisa rasmiga ah.
In kasta oo hawlgalkeeda khadka tooska ahi yahay mid sax ah, waxaan haynaa codsi desktop haddii loo baahdo, labadaba Windows, MacOS ama Linux. Codsigan desktop wuxuu na siinayaa sahlanaato iyo shaqeyn aan ku tirtirno asalka koox sawirro ah oo isla markiiba badan.
Waxaa sidoo kale lagu dhex dari karaa aalado kale sida Zapier oo aan ka dhex helno waxyaabo kale oo fiilooyin ah si loogu dhex daro barnaamijyada kale. Haddii aan rabno wax la mid ah fiidiyowga, isla soo-saaraha ayaa leh qalab lagu tirtiro asalka fiidiyowyada.
Ka saarida AI
Qalab kale oo gaar ah oo lagu tirtiro lacagaha ayaa ah 'Removal AI', oo in badan oo ka mid ahi ka mid tahay kuwa ugu fiican tan iyo tan Kaliya kuma fekerayso tirtiridda asalka laakiin sidoo kale waxay ku dareysaa dib-u-farsameyn dambe iyada oo loo marayo sirdoonka farsamada taas oo ku siinaysa sawirka jaan go'an oo aanu codsi kale oo web ahi ku siinin. Natiijada kama dambaysta ahi waxay aad ugu egtahay waxa aan ka heli karno tifaftire sawir qaade u ah, wax la mahadiyo haddii aan doonayno inaan sawir qaadno si dhab ah u adeegsanno.
Marka la soo koobo, haddii aad wax dhakhso ah ku raadinayso saar BG waa nagu filan tahay, laakiin haddii aad rabto natiijo "fiican" ka sii badan, Ka-saarista AI ayaa habboon.
Codsiyada si loogu dhejiyo asalka cad mobilka
Haddii aan raadino tifaftireyaasha sawirrada, waxaan ka heli doonnaa kuwo badan oo aan ku haysanno qalabkan, laakiin ma badna intaas noo fududee inaan isla markiiba isticmaalno. Halkan waxaan ku faahfaahin doonnaa 3da ugufiican uguna fudud ee mobilka loo heli karo.
Mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee wax ka beddelka sawirku waa shaki la’aan Adobe Photoshop, oo ku habboon labada kumbuyuutar iyo tifaftirka casriga ah. Way u fududahay magaca inuu garaaco gambaleelka maxaa yeelay marka lagu daro tafatirka sawirka wuxuu leeyahay codsiyo kale. Marka lagu daro dhigida asalka cad sawirada, waxaan haysanaa ikhtiyaarro sida goynta sawirada, codsi miirayaasha, sameynta naqshado shaqsiyeed ama sameynta astaamo.
Waxaan haynaa noocyo kala duwan oo barnaamijkan ah, kuwaas oo aan ka helno nooca Windows, nooca loo yaqaan 'macOS' ee ka hooseeya rukunka iyo codsiyada boosteejooyinka moobiilka labadaba Android sida macruufka. Haddii aad raadineysid codsi badan oo kala duwan marka lagu daro haysashada aaladda na siineysa shaqadan, waxay sidoo kale naga caawineysaa sameynta nuqul fudud oo sawiradeena ah, shaki la'aan tani waa xulashada ugu fiican.
Sawirada Tifaftiraha Photoshop Express
Codsigan waxaa si gaar ah loogu talagalay shaqadan gaarka ah, shaki la'aan tan ugu badan ee la muujiyey haddii ujeeddada kaliya ay tahay taas, in kastoo waxaa ka maqan dhammaan xulashooyinka tafatirka ee horumarsan ee Adobe uu leeyahay. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si otomaatig ah u tirtirto lacagaha sirdoonka macmalka ah ee arjiga laftiisa. Intaas waxaa sii dheer, dalabku wuxuu na siinayaa noocyo kala duwan oo midabyo caadi ah oo lagu daray caddaan ama xitaa nashqado badan oo xad-dhaaf ah.
Codsigu wuxuu na siiyaa arrimo badan, laakiin waxaan sidoo kale isticmaali karnaa sawiradeena si aan u bedelno asalka oo aan markaa u abuurno qabsiyo gaar ah. Codsiga waxaa loo heli karaa labada Android iyo iOS, Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud. Tani waxay sidoo kale naga caawinaysaa inaan ku abuurnno PNG sawirro una adeegsanno tafatirka sawirrada. Waxaan ku arki karnaa noocyadeeda kala duwan iyo shuruudaha ay ku qoran tahay bogga rasmiga ah.
Tifatiraha Madadaalada Eraser Madadaalada
Codsi kale oo weyn oo si gaar ah loogu talagalay abuurista PNG iyo dalabyada asalka ah ee sawirradeena ku habboon kuwa isticmaala iPhone. Waxaa loo tixgeliyaa adeegsadayaasheeda codsi aad u xiiso badan oo macquul ah. Codsiga waa mid aad u fudud in loo isticmaalo terminaal kasta oo ku yaal dhismaha iyada oo aan hoos loo dhigin ama aan la gaabin.
Codsiga ayaa nagu hagaya si aan si fudud ugu saxno sawirradeena si fudud, Waxaan ka dalban karnaa asalka hufan si aan u sameysano PNG, sooyaal cad ama sooyaal ka yimid gallerykeena. Waxay sidoo kale na siineysaa xoriyad aan wax ku saxno oo aan dib ugu soo celino sawirada sida aan ujeclaanno, ku darida miirayaasha ama aan u cusbooneysiinno midabka iyaga. Kaliya waa inaan ka soo degsano barnaamijka AppStore oo si buuxda ugu raaxee bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Sawir » Qalabka khadka tooska ah ee sawir cad laga dhigo